हाम्रा अभिभावकहरुले समेत निर्धक्क चलचित्र हेर्न सकुन :नायिका “हर्षिका श्रेष्ठ” – Namaste Filmy
“हर्षिका श्रेष्ठ” नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी आशा लाग्दी नायिका हुन । फ्रि–फ्रयाङ्, मर्डन यी नायिकाले दश चलचित्रहरुमा सफल अभिनय गरिसक्नु भएको छ । उहाँको अंगाले यो मायाको, कर्कस र जंजिर प्रर्दशन भइसकेका चलचत्रि हुन भने ”मिसन पैसा रिलोडेड”, नतिजा, नागबेली, मुखौटा, मिस्टेक, टिम ४, चलचित्रहरु रिलिज कै क्रममा रहेका छन् । हाल राजेन्द्र श्रेष्ठको लगानीमा निर्माण भइरहेको चलचित्र “साइकल” मा ब्यस्त रहनु भइरहेको छ । यीनै चिटिक्क आकर्षक नायिकासँग चलचित्र क्षेत्रका विविध पक्षमा भएको कुराकानीको छोटो अंश प्रस्तुत गरिएको छ ः
प्रश्न ः अहिले कुन कुन चलचित्रमा ब्यस्त हुनु हुन्छ ?
उत्तर ः तत्काल म राजेन्द्र श्रेष्ठद्धारा निर्माणाधिन चलचित्र “साइकल” मा ब्यस्त छु ।
प्रश्न ः तपाईलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्र की सुन्दरी नायीका भनिन्छ । तपाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिने ग्याल्र्मसको विषयमा कत्तिको सचेत रहँदै आइरहनु भएको छ ?
उत्तर ः वास्तवमा यो लामै बहसको बन्न सक्छ । अभिनयको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने त कथावस्तु अनुसार निर्माता÷निर्देशकको अनुसार डिजाइनरले ड्रेसहरु हामीलाई उपलब्ध गराउने हो । हामीलाई जस्तो भनिन्छ त्यस्तै लगाउने हो । तर कथावस्तु सुहाउँदो भने हुनु पर्दछ ।
प्रश्न ः एक्सपोजको सन्र्दभमा तपाई आफुलाई कत्तिको उदार ठान्नु हुन्छ ?
उत्तर ः पुर्णरुपमा नै एक्सपोज भएर काम गर्ने हो भने त त्यस्ताहरुका लागि अन्य चलचित्रहरु पनि बन्ने गर्दछन, त्यता नै लागे भइहाल्यो । तर हामी कहाँ सचेत हुनु पर्दछ भने हाम्रा अभिभावकहरुले समेत निर्धक्क चलचित्र हेर्न सकुन । यो विषयमा म आफुलाई त्यस्तो उदार ठानेकी छैन ।
प्रश्न ः तपाई आफुले अहिले सम्म “एक्सपोज स्क्याण्डल” को कत्तिको सामना गर्नु परेको छ ?
उत्तर ः चलचित्र नतिजाको एउटा गीतको दृष्याकंन जसको निर्देशन बसन्त श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो, त्यसका केहि दृष्यहरुका लागि सेन्सर बोर्डले स्विकृत नदिएको घटना छ । भाग्यवस यस्तो स्काण्डलमा अहिले सम्म फस्नु परेको छैन ।
प्रश्न ः नव प्रवेशी खासगरी नायिकाहरु धेरै नै उदार रुपमा एक्सपोज हुने गरेका छन । यस विषयमा तपाईको राय के रहेको छ ?
उत्तर ः नव प्रवेशी नायिकाहरुले सर्व प्रथम त आफुलाई चाडै नै चर्चामा ल्याउन उदार देखिएका हुन सक्छन । म त त्यसलाई अपरिपक्वता भन्छु । अर्को कुरा यो विषय निर्माता निर्देशकहरुले नबुझेका हुन वा धेरै बुझेका हुन म आफुले भने बुझ्न सकिरहेकी छैन । आफु एउटा स्थापित कलाकारहरु भएर पनि हुनसक्छ मलाई भने अनावश्यक एक्सपोज हुन कसैले बाध्य बनाउनु सकेका छैनन ।
प्रश्न ः आफ्नो काम र आम्दानी प्रति कत्तिको सन्तुष्टि हुनु हुन्छ ?
उत्तर ः यो एउटा रमाइलो क्षेत्र पनि हो । काम गर्दा आनन्द आउँछ त्यो एउटा पक्ष हो भने सन्तुष्टि अर्को पक्ष हो । आफुलाई चित्त बुझ्ने(सन्तुष्टि) तरिकाले चलचित्रमा प्रस्तुत हुन अझै सम्म पाइरहेकी छैन भन्ने लागिरहेको छ । आम्दानीको सन्र्दभमा त पत्रकार, कलाकार सबैलाई प्रष्ट भएकै कुरा हो, चलचित्रको प्याकअप पछि आफ्नो पारिश्रमिकको लागि निर्माता निर्देशकहरुसँग कति झमेला उठाउनु पर्छ भनेर ।
प्रश्न ः यस क्षेत्रमा तपाईले सबै भन्दा दुःख लाग्दो पक्ष के पाउनु भएको छ ?
उत्तर ः पारिश्रमिकको विषयमा त समस्या छदैछ । तर सबै भन्दा दुःख लाग्दो पक्ष भनेको दर्शकहरु नेपाली चलचित्रलाई हल सम्म आएर नहेरिदिनु नै हो । हिन्दि चलचित्रहरुका लागि भने मरिमेट्ने दर्शकहरु नेपालीहरुले ठूलै दुःख, कष्ट उठाएर अनि त्यत्रो लगानी र मेहनत गरेर बनाइएको चलचित्र हेरिदिँदैनन् । यो जस्तो दुःखको कुरा अरु के हुन सक्छ र ?
प्रश्न ः अन्तिम मा केहि भन्न चाहनु हुन्छ ?
उत्तर ः अहिले देशका अधिकांश शहरहरुमा स्तरिय चलचित्र गृहहरुको पनि निर्माण भइसकेका छन । कृपया नेपालीहरुको योगदान रहेको नेपाली चलचित्रहरुलाई माया गरिदिनु र हल सम्म आएर हेरिदिनु होला भन्ने हृदय देखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
"कबड्डी"को ओ.एस.टी. सार्वजनिक :"माया खै कसले बुझ्यो "